दुर्भाग्यवश, कम्प्युटर गेम को विकासकर्ताहरूले छैन आफ्नो उत्पादन चलाउन र हरेक खेल चरणको मा राम्ररी काम गर्नेछ आज ग्यारेन्टी गर्न सक्छ। र यो कि उत्पादन कम गुणस्तर खेल, तर त्यहाँ जो पूर्ण खाता मा लिइएको गर्न सकिँदैन धेरै फरक पीसी विन्यास, हो भन्ने तथ्यलाई छैन। तदनुसार, किनकी यो केही कम्प्युटर मा, खेल, चलाउन भनेर सक्छ उड, सुस्त र यति मा बाहिर जान्छ। खुसीको कुरा, यस्तो समस्या खेलाडीहरूलाई सँगै कुनै पनि अवस्था बाहिर एक बाटो पत्ता वा विकासकर्ता सम्पर्क गर्न तिनीहरूले सबैभन्दा समस्या सामना गर्न सक्नुहुन्छ भने त, फरक मान्छे मा बारम्बार छन्। उदाहरणको रूपमा, साधारण मामला नतीजा नयाँ भेगास लन्चर सुरु गर्छ जहाँ छैन लाग्न - र खेलाडीहरू हजारौं यो समस्या सामना गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले, तपाईंले यस्तै अवस्था छ कि घटना मा केटी गाइड संग आफैलाई familiarize गर्नुपर्छ।
त्यसैले, खेल नतीजा नयाँ भेगास मात्र तपाईं ल्यापटप संग खेलिरहेका छन् कि हालत मा लन्चर सुरु गर्दैन भन्ने तथ्यलाई सुरु गर्नुपर्छ। कम्प्युटर मा, यो समस्या अवलोकन थिएन। र यो पछि लेखिएको हुनेछ जो आफ्नो कारण, छ। त्यसैले, तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत कम्प्युटरमा यो आरपीजी खेल्न निर्णय भने, तपाईं चिन्ता गर्न सक्दैन - विशेष, यो त्रुटि चिन्ता गर्न हुनेछैन। खैर, तपाईं अझै पनि आफ्नो ल्यापटप खेल भने, धेरै अक्सर नतीजा नयाँ भेगास यी उपकरणहरूमा लन्चर सुरु गर्दैन भन्ने तथ्यलाई लागि तयार हुन। किन? यसलाई कसरी मिलाउने? वास्तवमा, सबै एकदम सरल छ - यो समस्या हल हुन्छ रूपमा सजिलै।
पीसी यस्तो अवस्थामा सिर्जना छैन - समस्या नतीजा नयाँ भेगास मात्र ल्याप्टप मा लन्चर सुरु गर्दैन छ। यसको आफ्नै स्वतन्त्र भिडियो स्मृति, एक स्मृति उपकरण र पाइन प्रयोग गर्ने एकीकृत, - र कारण खेल ल्याप्टप दुई ग्राफिक्स कार्ड को उपस्थिति छ। स्वाभाविक, को एकीकृत कार्ड खेल को लागि अभिप्रेरित छैन, त्यसैले आधुनिक परियोजनाहरू सामान्यतया यो हुनेछ मा चलाउनुहोस्। यो लागि हो र आफ्नो स्मृति बढी कार्ड आवश्यक छ। किन नतीजा नयाँ भेगास परम संस्करण चल्दैन? यो कुरा खेल स्वतः मात्र एकीकृत कार्ड पहिचान र दोस्रो बेवास्ता छ। फलस्वरूप, यो सिस्टम एक एकीकृत भिडियो कार्ड मा खेल सञ्चालन गर्न खोजिरहेको छ जस्तो देखिन्छ, तर यो सुरुवात बन्द छ, त्यसो गर्न असफल भएमा, र खेल सुरु गर्दैन। खैर, अब तपाईं समस्या को कारण बुझ्न, त्यसैले यो समाधान कसरी गर्न, यसलाई ठीक र समायोजन सामना गर्न समय।
स्वाभाविक, नतीजा नयाँ भेगास प्राविधिक मुद्दाहरू को मामला मा धेरै फरक हुन सक्छ, त्यसैले कुनै पनि मामला मा तपाईं ठ्याक्कै थाहा जहाँ तिनीहरूले उत्पन्न भएमा तिनीहरूलाई समस्या समाधान गर्न, आफ्नो खेल कन्फिगरेसन फाइल फेला पार्न आवश्यक छ। यस मामला मा, तपाईं कम्प्युटर पहिले नै खेल सञ्चालन गर्ने प्रयास उनको विशिष्ट कन्फिगरेसन सोधेर द्वारा छ, किनभने तिनीहरूलाई हटाउन यी फाइलहरू पहुँच आवश्यक - अर्थात्, एक एकीकृत कार्डको प्रयोग। तदनुसार, कि तपाईं प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ नक्सामा बिन्दु अघि, तपाईं सफा स्लेट सुरु गर्न सबै डाटा मेटाउन आवश्यक छ। तर यो हुनेछ कि केवल पहिलो कदम हो। के तपाईं नतीजा नयाँ भेगास चल्दैन भने के जान्न चाहन्छु भने, तपाईं राम्रो यो चरण मा बास र सार्न चाहन्छु।
कार्ड कन्ट्रोल प्यानल
तुरुन्तै यो क्षण देखि को नतीजा नयाँ भेगास सुरूवात समस्या खेल फाइलहरू मार्फत निर्णय गर्ने गरिने छैन, र एक भिडियो कार्ड यो खेल बेवास्ता भन्न गर्नुपर्छ। आफ्नो कार्य - प्रणाली तपाईं यो खेल सञ्चालन गर्न चाहनुहुन्छ जब, प्राथमिक रूपमा आफ्नो ग्राफिक्स कार्ड पहिचान प्राप्त गर्न। त्यसैले तपाईंले आफ्नो कार्डको नियन्त्रण प्यानल कसरी चलाउन ठीक फेला पार्न आवश्यक छ। अक्सर, यो सञ्चालन प्रणालीको नियन्त्रण प्यानल मार्फत गर्न सकिन्छ, तर छिटो तरिका हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, केही अवस्थामा, यसको लागि प्रतिमामा एक गर्न राख्नु उपकरणपट्टी डेस्कटपमा, तपाईं क्लिक को बस एक जोडी आफ्नो गन्तव्य प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि मामला मा, तपाईं यो माध्यम हो किनभने तपाईं ल्यापटप खेल नतीजा नयाँ भेगास संग अनुभव एक समस्या समाधान हुनेछ आफ्नो ग्राफिक्स कार्डको नियन्त्रण प्यानल प्राप्त गर्न आवश्यक।
निस्सन्देह, तपाईंले आफैलाई लघु ईन्जिनियरिङ् विभाग हो भने, नतीजा नयाँ भेगास तपाईं समस्या उत्पन्न गर्न असम्भाव्य छ, त्यसैले तपाईं तिनीहरूलाई कुनै पनि सामना गर्न सक्षम छौँ। तर सबै भन्दा खेलाडीहरूलाई छैन प्राविधिक प्रतिभावानबाट छन्, त्यसैले तिनीहरू अझ विस्तृत सम्पूर्ण प्रक्रिया रंग गर्नुपर्छ। त्यसैले नियन्त्रण प्यानल भिडियो कार्ड मा पहिलो चरण - तपाईं कार्ड अगाडि राख्न चाहेको कार्य को विकल्प हो। सुरू गर्न तपाईं भनिन्छ जो डाटा को स्तम्भ, पत्ता लगाउन कन्ट्रोल प्यानल मा आवश्यक हुनेछ "कार्य चयन गर्नुहोस्।" एउटा सानो उप-मेनु हुनेछ - शीर्षक अन्तर्गत मान, तपाईं "3D सेटिङहरू" चयन गर्न आवश्यक हुनेछ जो बीच धेरै हुनेछ। यसलाई तपाईंले छैन जो पाउन त गाह्रो 3D सेटिङहरू ", चयन गर्न 'व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुनेछ। त्यसपछि तपाईं एक कदम नजिक नतीजा नयाँ भेगास प्ले गर्न एक नयाँ पृष्ठ मा आफैलाई फेला पार्न र हुनेछ। खेल चलिरहेको समस्या तथापि, अहिलेसम्म हल गरिएको छैन, त्यसैले सार्न। त तपाईं धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुनेछ "सफ्टवेयर सेटअप" शीर्षक ट्याब चयन गर्नुहोस्।
एक विन्डो जहाँ तपाईं जो तपाईं ग्राफिक्स मामिलामा कुरा परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो कम्प्युटरमा कुनै पनि कार्यक्रम थप्न सक्छ अगाडि, खुल्नेछ। तदनुसार, तपाईं के खेल नतीजा नयाँ भेगास सुरु गर्छ भने को प्रश्न रुचि राख्नुहुन्छ भने, यदि तपाईं "थप्नुहोस्" बटन मा क्लिक गर्न त खेल चयन गर्न आवश्यक हुनेछ। कि पछि, तपाईं थिचेर तपाईँको चयन पुष्टि गर्न आवश्यक हुनेछ "थप्नुहोस् चयन कार्यक्रम।" जब तपाईं, तपाईं सिद्धान्त छ जो, दोस्रो चरण, निर्देशित गरिने छ, र पूर्ण आफ्नो समस्या समाधान हुनेछ। तर झुक्किएर गलत कार्यक्रम वा चयन कार्यक्रम को लागि गलत कार्य चयन गर्न ताकि, धेरै ध्यान दिएर कार्य। तपाईं सही छन् भने, समस्या उत्पन्न हुँदैन।
खैर, यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आउँछ, र त्यो तपाईं नतीजा नयाँ भेगास प्ले गर्न सक्नुहुन्छ भने, कि समस्या समाधान हुनेछ। तपाईंले पहिले नै यो खेल छ, र अब तपाईं एउटा नयाँ ट्याब पुनः निर्देशित गरिएको छ। यहाँ तपाईं के तपाईं चयन एक कार्यक्रम मा प्रयोग को लागि एक ग्राफिक्स त्वरक चयन गर्न उत्प्रेरित गर्ने वस्तुमा केवल ध्यान गर्न आवश्यक छ। तपाईं पूर्ण सूची विस्तार भने, तपाईं यसलाई तपाईंले स्थापित सबै कार्डहरू देख्नुहुनेछ। आफ्नो नोटबुक मा, क्रमशः, यो तपाईंको एकीकृत कार्ड र यसको आफ्नै भिडियो स्मृति थप कार्ड हुनेछ। तपाईं सम्झन सक्छ रूपमा, समस्या ठीक खेल स्वतः एक एकीकृत नक्सा चयन गर्नुहोस् र अतिरिक्त बेवास्ता हुनेछ भन्ने तथ्यलाई देखि उत्पन्न हुन्छ। तदनुसार, तपाईं स्वयं दोस्रो कार्ड लागि प्राथमिकता सेट गर्न, र त्यसपछि तपाईंको परिवर्तन बचत र नियन्त्रण प्यानल ग्राफिक्स बाहिर निस्कन आवश्यक छ। यसलाई सुरुमा लाग्न सक्छ रूपमा यो रूपमा गाह्रो थियो, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा - कि तपाईं समस्या सामना गरेका छन् सबै छ।
समस्या हल, त्यसैले यसलाई कसरी खेल काम गर्दछ जाँच गर्न समय। उहाँले पहिले नै बरु एकीकृत संस्करण भन्दा, आफ्नो थप कार्ड निर्धारण र यसलाई चयन गर्न हुनेछ यो समय - यो गर्न, लन्चर चलाउनुहोस्। तर खेल जाने छैन - सुरु लागि सेटिङ खण्ड, जहाँ तपाईं आफ्नो भिडियो कार्ड लागि आदर्श सेटिङहरू को स्वचालित चयन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ भ्रमण गर्न आवश्यक छ। तपाईं स्वतः गरिनेछ लागि यो सबै - तपाईं संकल्प, विस्तार र यति मा चयन गर्न आवश्यक छैन। प्रक्रिया पूरा भएपछि, तपाईं सबै सेटिङहरू, जाँच गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंलाई रुचि के ठीक। र त तपाईं पहिले नै खेल समावेश गर्न सक्नुहुन्छ - र लन्चर बन्द भएको थियो पछि भने प्रयोग, तर खेल सुरु गर्दैन, तर अब सबै राम्रो छ। लन्चर बन्द गर्नेछ, र खेल मा बारी र तपाईंले यो तपाईं राम्रो ग्राफिक्स कार्ड, तपाईं अधिकतम ग्राफिक्स सेटिङहरू सेट गर्न अनुमति दिन्छ जो छ, विशेष गरी यदि पूर्णतया रमाइलो गर्न सक्षम हुनेछ।
खेल Wolfenstein: नयाँ आदेश। सिस्टम आवश्यकताहरु Wolfenstein: नयाँ आदेश
"हुन सक्छ र जादू5को हीरो": गाइड
म कर्सर "Dota 2" मा गायब भने के गर्नुपर्छ
ट्रक मा रेसिंग।
सलाद "Chanterelle" कोरियाली गाजर। पकाउने भाँडा लागि विकल्प
चाँडै र सजिलै कसरी आफ्नो हात संग मेयोनेज तयार
कस्मेटिक उत्पादनहरु संग pigmentation उपचार
कारणहरू र उपचार: मा नङ अनुदैर्ध्य streaks
को GEF को स्कूल मा विधिहरू र पाठ को संगठन को प्रकारका